DHAGEYSO Dadkii ku barakacay dagaalada gobolka Sool oo macluul wajahaya. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Dadkii ku barakacay dagaalada gobolka Sool oo macluul wajahaya.
Star FM November 7, 2018
Maamulka Puntland ayaa sheegay in boqolaal qoysas ah oo guryahooda ka barakacay kadib dagaal beeleedyo ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Dhumay ee gobolka Sool ay ka dhalatay xaalad binu aadanimo oo aan wanaagsanayn.
Wasiirka arimaha gudaha ee maamulka Puntland C/laahi Tima cade oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xaalad macluul ah ay wajahayaan dadkii ku barakacay dagaaladii ugu danbeeyay ee ka dhacay deegaanka Dhumay ee gobolka Sool.
Waxa uu tilamaamay in xog aruurin uu maamulka Puntland sameeyay ay ku ogaadeen in kabadan 6,000 oo qoys inay ka barakaceen deegaanka Dhumay dadkaasinaya ay dhibaatooyin dhanka nolosha ah wajahayaan xiligaan.
Wasiirka arimaha Gudaha Puntland ayaa sheegay in dadkaasi ay si deg deg ah ugu baahan yihiin cuno,bacaha roobka laga galo iyo biyo ay cabana maadaama ay xaalada xun wajahayaan.
Deegaanka dhumay ee gobolka Sool ayaa waxaa dhawaan ka dhacay dagaal u dhexeeyay labo maleeshiyo beeleed oo isku deegaanka waxaana ku dhintay kuna dhaawacmay dagaalkaas dad fara badan sidoo kale boqolaal qoysas ah ayaa ka barakacay guryahooda.
← DHAGEYSO Ciidanka xoogga Soomaaliya oo howlgalo wadooyin kala furayo bilaabay.
Wafdi ka socda wasaarada Gaashaan dhiga Turkiga oo maanta Muqdisho ku soo wajahan. →